တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အားတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သည် ယနေ့နံနက် ၁ဝနာရီက နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ဧည့် ရိပ်သာခန်းမဆောင်၌ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ်H.E.Mr. Sun Guoxiang နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးH.E.Mr. Hong Liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ထိုသို့လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့ လျှောက်လှမ်းနေသည့် နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းအရ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ဒီမိုကရေစီကို ရှောင်လွှဲ၍မရ ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီတွင် နိုင်ငံ ရေးအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များပေးထား ပြီးဖြစ်၍ လက်နက်ကိုင်ပြီး အခွင့် အရေးတောင်းဆို၍မရကြောင်း၊ ယင်းအပေါ်မူတည်၍ မည်သို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင် မည်ကိုသာ စဉ်းစားဆောင်ရွက် ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည်ပမှ ဖိအားများမပါဘဲ မိမိသဘောဆန္ဒ အရချောမွေ့စွာလိုက်ပါဆောင်ရွက် ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။တွေ့ဆုံ ပွဲသို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်နှင့်အတူညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံး(ကြည်း)မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ်H.E.Mr. Sun Guoxiang နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးH.E.Mr.Hong Liang နှင့် တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဆက်လက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိနိုင်ငံ တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းပြီး စစ်မှန် သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်း ကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန် အတွက် ပထမသက်တမ်းကာလ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘော တူစာချုပ် (NCA) ကိုလက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်း ရေးညီလာခံကျင်းပခဲ့မှုအခြေအနေ များ၊ ဒုတိယသက်တမ်းကာလ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှNCA ကိုအခြေခံ ပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံကို ဆက် လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အောင် မြင်မှုများရရှိသကဲ့သို့ အချို့မှာ လည်းသံသယကြောင့်ဆွေးနွေးရာ တွင် ပါဝင်မှုမရှိသည့်အခြေအနေ များနှင့် ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက် အောင်မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်နေမှု အခြေအနေများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ် တွင်ဦးတည်သွားခြင်းဖြင့် ပိုမိုပြီး မြန်ဆန်နိုင်မည့်အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်H.E.Mr. Sun Guoxiang နှင့် သံအမတ်ကြီး တို့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် များစွာအရေးကြီးကြောင်း၊ အောင်မြင်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ် စဉ်များအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်း နှင့် တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ နှင့်ပတ်သက်၍လည်း အတတ်နိုင် ဆုံးကူညီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြော ကြား၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့် သွား ရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည့်အခြေ အနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှစစ် ရေးအသာစီးရရှိမှုအခြေအနေနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းအချို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်း လှမ်းလိုမှုအခြေအနေများ၊တရုတ်- မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပထမ အကြိမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်း ပြုလုပ်သည့် ၂+၂အစည်းအဝေးပွဲ များအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှု၊ နှစ် နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုမှုအခြေအနေ များအားဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြီးခဲ့သည့် ခြောက်နှစ်တာကာလအတွင်း ငြိမ်း ချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုးစား အားထုတ်မှုများကြောင့် ယခင် ထက် တိုးတက်မှုများစွာရှိကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ရှစ်ဖွဲ့နှင့် NCAစာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်သည့်အဖွဲ့များ ပါဝင်လာရေးဆက်လက်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊မြန်မာ နိုင်ငံတောင်ခြမ်းတွင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ မကျန် သလောက်ဖြစ်သွားပြီးနိုင်ငံမြောက် ခြမ်းတွင် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်၌UWSA"၀"၊ NDAA, MNDAA, TNLAနှင့် KIAအဖွဲ့ များကျန်ရှိကြောင်း၊ 'ဝ' အဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက ငြိမ်းချမ်း ရေးရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့ဖြစ်၍ ငြိမ်း ချမ်းရေးသက်တမ်းကာလအကြာ ရှည်ဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေ နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊ မိမိနိုင်ငံတွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရှိရန်အတွက် လက်နက်ကိုင်လမ်း စဉ်မရှိမှ၊ လက်နက်စွန့်လွှတ်မှသာ ချုပ်ငြိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်း ချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုချင် ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေ မည့်အပြုအမူများကိုရှောင်ရှားခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကMND- AA နှင့်TNLAအကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများနှင့်ပတ်သက် ၍ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသနှင့် ပလောင်ကိုင်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသများ ပေးထားပြီးဖြစ် သောကြောင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း အရသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပြီး အခွင့် အရေးတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်၍ မရနိုင်သည့်အခြေအနေများ၊KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ခံသမိုင်း ကြောင်းနှင့် ယခုထက်တိုင် ဝမ် ပေါင်နိုင်ငံထူထောင်ရေးရည်မှန်း လုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကတိ ကဝတ်တည်ရန် လိုအပ်မှုအခြေ အနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြား ခဲ့ပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိစ္စရပ်များ၊ ဒုတိယအကြိမ် ၂+၂ အစည်းအဝေး ကျင်းပရေးကိစ္စရပ်များအားရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေး ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကအမှတ် တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူစုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။